LYD GLASS Vahaolana iray ajanona ho an'ny fitaratra sy ny fitaratra rehetra ilaina
Mpanamboatra matihanina fitaratra maritrano any avaratr'i Sina
Qinhuangdao LianYiDing Glass Co., Ltd.dia miorina amin'ny tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy Qinhuangdao. Manakaiky ny Seranana Qinhuangdao sy Seranan-tsambon'i Tianjin misy fitaterana mety sy toerana tsara toerana.
Taorian'ny fampandrosoana efa ho 20 taona dia manana fitaovana fanodinana manerantany izahay, ekipa teknika mitarika indostrialy ary foto-kevitra fitantanana maoderina. Manana tsipika famokarana Glass insulated 2 mandeha ho azy isika izao, tsipika famokarana Glass miisa 2, tsipika famokarana Glass laminated 4 mandeha, tsipika famokarana Silver Mirror 2, tsipika famokarana Glass Mirror 2 Aluminium, tsipika famokarana Glass Screen 1 fanontana, famokarana 1 Low-e Glass tsipika, andalana 8 amin'ny tsipika fanenitra, fitaovana fanapahana jet-drano 4, milina fandavahana automatique 2, tsipika famokarana chamfering 1 mandeha ho azy ary tsipika famokarana hafanana milentika 1 set.
Mamokatra ny sakany: ny vera marihitra fisaka (3mm-25mm), ny vera miolakolaka, ny vera voarendrika (6.38mm-80mm), ny vera mitaingina, ny fitaratra aluminium, ny fitaratra volafotsy, ny fitaratra tsy misy varahina, ny vera milona mafana (4mm-19mm), ny sandblasted Glass, vera vita sokitra asidra, vera fanontana lamba, vera fanaka.
Miorina amin'ny fitsipiky ny "Marina sy mahitsy fo, ny kalitao tsara indrindra ary ny serivisy voalohany indrindra", Azontsika atao ny manome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny karazana famokarana fitaratra ary ny vokatray dia efa tamin'ny alàlan'ny CE-EN 12150 Standard any Eropa, The CAN CGSB 12.1-M90 Standard any Canada, The ANSI Z97.1 ary 16 CFR 1201 Standard any Etazonia.
Kolontsaina sy fifanakalozana orinasa
Miorina amin'ny foto-kevitry ny "fahombiazan'ny famokarana, fitantanana finoana tsara" ary ny fotokevitra "manompo am-pahatsorana ny mpanjifa ary mamorona lanja orinasa", ny hetsiky ny asa eo amin'ny tsena dia mametraka ny tombontsoan'ny mpanjifa hatrany, ary mametraka ny crédit amin'ny toerana voalohany. Mba hametrahana endrika maha-izy azy an'ny orinasa dia hanao ezaka tsy manam-petra izahay hamorona toe-tsaina mazoto sy hikolokoloana orinasa, handinika ny antsipiriany ary hiezaka hanatsara ny fahitana vokatra sy ny tsy fivadihana, ny filan'ny nofo ary ny foto-kevitra momba ny serivisy tonga lafatra. Amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika, tsikelikely, mampandroso tsena tsikelikely, amidy amina firenena 20 mahery ny vokatra. Izahay dia miziriziry tsy hiala amin'ny kalitao, hivoatra amin'ny fanavaozana, ary hanome anao vahaolana iray vera tokana.
Izahay dia manizingizina amin'ny fanomezana foto-kevitra momba ny serivisy sy kalitao avo lenta hanompoana ny mpanjifa tsirairay. Tongasoa ny mpanjifa hitsidika sy hifampiraharaha!